Many Years with My Old Flame – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on2October 2010 30 March 2012 Categories Sound File
5 thoughts on “Many Years with My Old Flame”
3 October 2010 at 7:28 am
စန္ဒယားချစ်ဆွေ သီချင်းတွေကို အလွန်နှစ်သက်ပါတယ်။ ဆရာဆိုထားတာ မနက်စောစော နားထောင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ တကယ်ကို ကောင်းပါတယ်။ ဝေမျှပေးတာကျေးဇူးပါ။
3 October 2010 at 1:04 pm
ကိုယ့် ဆရာက အသံကောင်း အဆိုကောင်းပဲဗျ
I am not able to read this Myanmar Font. Could you please give mealink that I can download this type of Myanmar Font so that I can read all these beneficial books? Thanks…
22 June 2011 at 9:27 pm
အ၇မ်း ကောင်း တယ်
အားကျ ပါတယ် ဆ၇ာ
Previous Previous post: About In Laws
Next Next post: On Discrimination 2: Sound File